I-Rustic Northwoods Haven - I-sauna yangaphandle! - I-Airbnb
I-Rustic Northwoods Haven - I-sauna yangaphandle!
Wilton, Minnesota, United States
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguCarla
UCarla ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Indawo entle epholileyo ekwipine ende ebomvu ejonge i-Grant Lake ephucukileyo. Indlu yamaplanga yakudala elungisiweyo enesauna ephandle. Ibhedi etofotofo, isitovu seenkuni, ikhitshi elincinci negumbi lokuhlambela elifana ne-spa. Isidlo sakusasa esisemgangathweni. Izinto ezinokusetyenziswa ezisetyenziswa nangabanye abantu: i-firepit, eyona ndawo inendawo yokubraya, idokhi, izikhephe, ii-kayak, ii-sleds. Ukuqaliswa kwesikhephe kunye nolwandle lukawonke-wonke eRognlien Park esecaleni komnyango. Uza kuyithanda imizila nezinto ezininzi ezenziwayo kule ndawo. Lonke ixesha lokuzikhupha elitofotofo kwimizuzu nje eyi-10 ukusuka eBemidji! Ebusika kufuneka ube nexesha elimnandi.
Uza kufumana 'iRustic Haven' ukuba yindawo efihlakeleyo nepholileyo yabantu ababini! Umjikelo wangaphandle we-pine kunye ne-tete isitulo se-tete zongeza ubutofotofo kunye nomtsalane kwisetingi yamaplanga. Kwaye i-sauna ephandle yinto entle xa kukho ukupholisa emoyeni!
Indlu yakho wedwa nezolileyo, ineeyunithi ezimbini kuphela ze-BnB -- zingadluli kubantu abayi-4 ababelana ngezinto ezinokusetyenziswa nanini na. Kuye kwathathwa ukuze kuphindwe izinto ezinokusetyenziswa ezidumileyo (umz. i-firepit ne-BBQ... izikhephe neekayaks). Iyunithi nganye inento yayo ekhethekileyo (iCabin = sauna; 1 Bdrm = ibhafu enamanzi ashushu).
Yonwabela imizila yaseNorthwoods ebusika okanye ehlotyeni. I-Grant Lake yaziwa ngokuba kukuloba okulungileyo kwaye ukufikelela kwisikhephe kuyafumaneka kwindawo elandelayo eRognlien Park ... enonxweme olunentlabathi entle kakhulu. Izinto ezenziwa ebusika ziquka ukuloba emkhenkceni, ukutyibilika ekhephini, ukutyibilika ekhephini, ukutyibilika ekhephini. Ukufikelela kwichibi kuvela kwizitebhisi ezisendlini okanye kwiPaki yeRaglien esecaleni kwayo. Ukupaka isikhephe okanye itreyini kuyanceda.
5.0 · Izimvo eziyi-30
Iivenkile zokutyela, imidlalo yeqonga, iimyuziyam, iivenkile ze-kitchy edolophini, Ukuhamba Ngemifanekiso eqingqiweyo, imicimbi, noPaul & Babe bakulindele eBemidji - ekumgama nje wemizuzu eyi-10! Ixesha lasehlotyeni: Umboniso wamanzi, iDragon Boat Race, iiTournies zokuloba, ngoJulayi 4 ngaphambili kwamanzi. Ebusika: Ukuloba emkhenkceni, ukutyibiliza emkhenkceni, iindlela zokuhamba ngekhephu, ukutyibilika ekhephini...kunye neBrrmidji Plunge! Ukutyibilika ekhephini ehlayo kufutshane naseBuena Vista.
Umbuki zindwendwe ngu- Carla
I'm a retired Environmental Sociologist who loves the Northwoods and enjoys spending time puttering around my lakeside property. I continue my academic work at Red Lake Nation Coll…
Le ndlu inendawo yokuhlala ephambili kunye neeyunithi ezimbini ezahlukeneyo zeendwendwe. I-fenceto eyimfihlo yenza iindwendwe zizive zikhethekile kwiyunithi nganye ezilungiselelwe ihlobo lika-2021. Ndifumaneka ukuze ndikwamkele kwaye ndikuncede ukuba kukho nantoni na oyifunayo, kodwa iindwendwe ziyakuvuyela ukubaleka kule ndawo. Iyunithi nganye inento yayo 'ekhethekileyo yangaphandle', kwaye yabelana ngezinye iindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke. Yindawo epholileyo - indlu enobuhle bendalo kunye nezilwanyana zasendle ezikhoyo. Yenziwe njengendawo yokuphumla yabantu abadala. Kukho izilwanyana zasekhaya kule ndlu, kodwa akukho ndawo yokuhlala yezilwanyana zasekhaya ezongezelelekileyo.
Le ndlu inendawo yokuhlala ephambili kunye neeyunithi ezimbini ezahlukeneyo zeendwendwe. I-fenceto eyimfihlo yenza iindwendwe zizive zikhethekile kwiyunithi nganye ezilungiselelwe…